Dhaloota Baraaruu | By Taye Dendea - Opinion and Analysis - Maroole Online Forum
Dhaloota Baraaruu | By Taye Dendea
Maroole 2017-11-02 14:16:56 UTC #1
Qaami Shanee jedhamu ololaan sammuu ummataa sakaalee gabrummaa nutti dheeressaa jira. Yeroo dheeraaf tokkummaaf jecha obsine. Amma jarri ifatti baatee tokkummaa Oromoo diiguuf kaate. Kanaafuu dhugaa jiru saaxiluu barbaachisa. Amalli Shaneen ittiin beekamtu kudhan kunooti.
Shaneen diina waliin taatee saba hiisifti. Namoota baayyee harka diinaa galchite. Gamasii si erganii gamanaa si qabsiisu. Ijaaranii ykn galmeessanii diinaaf gabaastu.Hidhamtoota maqaa ABOtiin Qaallittii fi Ziwaayi ciisan gara caalu jaratu hiisise. Ani wayita laman hidhame. Hoolachuu shaneetu na hiisise. Namooti Daawud mataan isaa qabsiise hidhaa jiru. Yoo hiree argattanii Qaallittii seentan dhugaa kana ni hubattu.
Sirbi shanee tokkicha. Barayyuu hiriira. Ganna kudhan dura “WBOn gaara san duuba qabateera” jechuun ijoollee gowwomsanii abiddatti galchan. Gooti akka Jaagamaa Badhaanee faati gaafas wareegame. Shaneen Jaagamaa ajjeechise amma biyya alaa taa’ee shaneef lallaba. WBOn jarri baantu gaafasii mitii har’ayyuu as hin baane. Baranas hiriiruma. Miilana qeerroo digdama caalutu ajjeefame. Barayyuu gadaan tan bilisummaa ti. Loluuf gadi bahanii ololaan saba goolu. Ijoollee xixinnoo sobanii diina naatoo namaaf hin qabnetti geessu. Hooomtuu hin geeddaramu. Sirba tokko callaa! Alaabaa hurgufaa sirbuu ykn booyuu qofaan bilisa nu baasuu hedu.
Shaneen tokkummaa Oromoo hin jaalattu. Amantii fi kutaan Oromoo qooddee walitti buufti. Yeroo tokko Arsii fi Harargee jidduutti shira goote. Gaafa Ziwaay turre ammoo Arsii fi Shawaa walitti buusuun ijoollee afaanii walfuudhanii nyaatan diina walitti goote. Booranaa fi Gujii jidduuttis daba hojjateerti. Boorana mataa isaa Sabboo fi Goonatti qooduuf yaaltee turte. Bakka maratti akka Oromoon wal shakkuuf hojjatti. Falaasami jaraatuu shakkii dha. “Ilmi namaa hin amanamu” siin jetti. Nama dhiisii ofuu akka hin amanne si gorsiti. Kun siyaasa diiggati. Ergama diinaa raawwatti.
Shaneen Oromoo jabaa hin jaalattu. Yoo argatte ofii ajjeefti. Gootota akka Gishuu Jaarraa fi Mullis Gadaa faa ni yaadanna. Tan biraa ammoo bosonni Solooloo haa lakkaayu. Dargaggoota bara 2006 diina loluuf achi galan harka caalu ajjeeftee “Ameerikaa ykn Awustiraaliyaa ergine” jette. Hiriyaan koo kan jarri hiriyaa irraa ajjeesan amma Ziwaayi jira.Yoo feete ammoo diina qabsiifti. Addeessaa Gadaa fi kkf akkasiin nyaataman. Yoo ati badii ishii qeeqxe “diina ykn gantuu” siin jetti. Waan ofii taaten si yaamti. Dr Mararaan Guraagee ta’uu jaratu ololaa bahe. Abbaaduulaan ammoo Tigree ta’uu nutti himaa turan. Oromummaa jaratu namaaf kenna. Yoo jara waliin kijibuu baatte Oromummaa sirraa fuudhu. Yookan ammoo lafumaa ka’anii basaasa siin jedhu. Amma ammoo bulchiinsa obbo Lammaa xureessuf Kaartuum irratti diina faana mari’ataa turte jedhama. Jabaa Oromoo arrabsuun amala isiiti.
Shaneen naamusa hin qabdu. Machooftuu, sobduu, qamaatuu, sagaagaltuu fi hattuutu gurmaa’ee “bilisummaaf qabsoofna” siin jedha.Hawaasa keessatti waan fokkuu dubbatuuf namatti hin tolle raawwataa ooltee bulti. Kijiba malee kabaja hin beektu. Waan ofii hojjattu siif kinniti…
Shaneen Oromoof naatoo hin qabdu. Dhiigi fi lubbuun Oromoo ishii hin mararu. Faayidaa murna ofii qofa laalti. Abbaan fedhe du’us, hidhamus isiin dhimma hin qabdu. Akkuma dhagaa tokko darbattee tokko kaafti. Dura daa’ima miiraan kakaaftee hiisifti. Sana booda jara dhiiftee kan biraa gowwomsti. Waan Oromoof hin tolle raawwatti. Miilana otoo lakkii jennuu diinni karaa ishiin seenee dhiiga obboleeyyan keenyaa dhangalaase.
Shaneen diina faana firooma qajeelaa qabdi. Dubbiin Girmaa Xurunee dhugaa kana ni addeessa. Diinni Oromoota nagayaa kanneen akka Baqqalaa fi Mararaa hidhee darara. Girmaa Xurunee, “hoogganaan qeerroo bilisummaa”, garuu nagumaan Finfinnee keessa bashannana. Gaafa ummati Girmaan basaasa ta’uu argee saaxilu shaneen irraa ittise.
8.Shaneen gaafa dabaan of muudee kaasee waan saba miidhu malee waan Oromoof tolu hin hojjanne. Olola qofaan lafa dhiphisa. Erga kallattii afraniinuu WBO bobbaasuu nutti himee ganna 16 ykn 17 tareera. WBOn guyyumaan “waraana diinaa digdama ykn soddoma hojii ala” gochaa oola. Akka SBOn himutti waraanni Itoophiyaa qaata dhume. Ololumaan lolaa bara lakkaayu. Ganna sana hunda lolanii lafa taakkuu takkallee hin dhuunfanne. Gaafa ummati fincilee mootummaa raasu jarri rasaasa takkayyuu hin dhukaafne. WBOn jarri dhaadhessu bakka seene dhabne. Sirbitoota cubbuu jaraa hin beekne qofatu “Daangaa irraa kukuffisa” jiraachuu isaanii nutti hime. Ergasii meeqa kuffisan laata?
Shaneen kijibaan jabaa of fakkeessiti. Waaan takkaa quba hin qabneen of himti. Gaafa paartiin Qindoominaa jabaatee mootummaa raasu “Nutu duuba jira” jette. Gaafa ONLF jabaatu ammoo “nutu isa ijaare” jette. Mana tasa gubata ykn riiqicha bakakkaan dhawe “WBOtu barbadeesse” jetti. Fincila ummati keenya godhe" natu hooggane" jette. Hiriira barana diinni yaamettis abbaa taatee da’imman balaaf saaxilte. Oromoo ollaa isaatiin wal nyaachisuuf diina waliin saboota biraa irratti yakka raawwachiifte.
Shaneen diinaaf dahoo kenniti. Bara darbe lafumaa kaatee fincila Oromoon ganna lamaaf gochaa ture “natu hooggane " jette.Sun diinaaf haguuggii kennuufi. Mootummaan namoota baayyee ajjeese. Kan hidhamee dararame ammoo haga hin qabu.Namoota nagayaa ajjeesu fi hidhanii dararuun yakka. Shaneen kana oolchuuf abbummaa fudhatte. Shaneen “Shororkeessaa” jedhamee seeraan waan beekamuuf mootummaan shororkeessitoota ajjeesuu fi hidhuu himatee yakka jalaa baha jechuu dha. Jeequmsa amma diinni yaame kanas shaneen " ana” jette. Kun diinaaf karaa banuu dha. Diinni maqaa ofiitin Oromoo jeequmsaaf baasuu hin danda’u. Qaama maqaa Oromoo qabu argatuu qaba. Kanaaf maqaa Shaneetin yaame.
Walumaagalatti shaneen farra qabsoo Oromoo ti. Ummanni Oromoo dhugaa kana sirriitti hubatuu qaba. Keessattuu qeerroon jara tana irraa abdii kutatee mala biraa laallatuu qaba. Waan hin jirre faana yeroo fi humna qisaasuun hin barbaachisu.
Dhalooti gurmuu diinaa fira se’ee faana rakkataa jira. Dhugaa qofatu rakkoo keessaa nu baasa. Namuu dhugaa beeku dubbatee gurmuu diinaa kana ofirraa cabsuu barbaachisa. Ammaan duuba wal sobuun eessayyuu nu hin geessu.
By Taye Dendea